Izinqolobane Zangaphandle - IntoKildare
Indawo ebukeka kahle eKildare yinto okufanele ibonwe unyaka wonke. Azikho izindlela ezishodayo zokuphuma uyohlola kule mecca egcwele imvelo, ngakho-ke ngena ungene ubone ukuthi yini ekukhuthazayo!
Ikhaya lezindawo ezisemaphandleni ezinhle kakhulu zase-Ireland, i-Co Kildare iyindawo enhle kulabo abathanda ukwenza okuhle kakhulu ngaphandle. Noma ngabe uthanda ihlathi sihambahamba noma ukungcebeleka okuhle ngasemfuleni, kunenani elikhulu lokuzikhethela e-Co Kildare. Futhi, evulekile amathafa kweThe Curragh, kanye nokuntuleka kwamagquma, kusho ukuthi i-Co Kildare iyindawo enhle kakhulu yabahamba ngezinyawo nabagibeli bamabhayisikili bayo yonke iminyaka.
ICoolcarrigan iyi-oasis efihliwe enengadi enhle eyi-acre eyi-15 egcwele izihlahla nezimbali ezingavamile nezingajwayelekile.
Izwa ingqikithi yangempela yezwe lase-Ireland eliphilayo futhi uzibuze ngomlingo wezinja zezimvu ezinhle ezisebenzayo.